Samsung AQV36JA Air Conditioner - BaganMart
York Air Con J Series
i greenerol aird conditioners
TCL Refrigerator 190 Ltr.
RF9000K French Door with FlexZone™, 854 L
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 291 view counts
Samsung AQV36JA Air Conditioner
Model : AQV36JA
လုပျငနျးအမညျ : ATNCY Trading Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 01 552996,09 5102193,09 421013443
Place of Origin: : California, United States
Power Type: : AC
Certification: : CB, CE, CSA, EMC, EMF, GS, LFGB, Ro
Power Source: : Electrical
Cooling/Heating: : Cooling/Heating
Power (W): : 1
After reaching the set temperature, the Air Conditioner changes its operation mode to "economic". By avoiding inefficient and frequent switching on and off of the compressor, the Vivace saves up to 50% in energy consumption, compared toanon inverter air conditioner. The Samsung AQV36JA Air Conditioner is extremely efficient in saving energy and money.
Enjoy the silent operation of your air conditioner with the Samsung Classic AQV36JA . The compressor works atalow speed to maintain the temperature resulting inaquieter motor and minimal fan noise assuring greater comfort and peace of mind.
FAST COOLING AND HEATING
When you change the temperature setting, the air conditioner will use the compressor's maximum capacity to quickly reach the desired temperature, resulting in 15% faster cooling and 50% faster heating.
ATNCY မှရောင်းချပေးလျက်ရှ်ိသော air -con,water cooler, air cooler,များကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သုံးစွဲသူ၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် အာရုံစိုက်ပြီး လိုအပ်ချက်များကို Customer တွေကျေနပ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။နည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အဦး၊ အဆောက်အဦး ပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ကောင်အား၊ နှစ်ကောင်အား စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်တပ်ဆင်လို့ရပါတယ်။ ဒါအပြင် လူနေအိမ်၊ စက်ရုံ၊ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံ၊ ရုံး၊ ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၊ ဟိုတယ်၊ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်များ၊ Standard air-conditioning projects စသည်တို့ကို စီမံပေးနိုင်ပါတယ်။ လေအေးစနစ်များ၊ ရေအေးစနစ်များ၊ High-rise water/electric aircon စနစ်များ၊ ဆေရုံများ နှင့် စက်ရုံများအတွက် Special aircon စနစ်များ၊ Semiconductor စက်ရုံများအတွက် အေးမြသန့်ရှင်းတဲ့ အခန်းဖြစ်စေရန်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လေးအေးပေးစက်များကို နည်းပညာနှင့်ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
For Samsung AQV36JA Air Conditioner
May I get the quotation for "Samsung AQV36JA Air Conditioner" ?